14.8.2019, Full time , Health / Beauty Care
•	လူနာများအားဖော်ရွေပျူငှာစွာ ဆက်ဆံ၍ ပြီးပြည့်စုံသော သူနာပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	Nurse Procedures များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	သူနာပြု လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးပြီး လက်ဝယ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	ကန်တော်ကလေး (မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်) အနီးတ၀ိုက်နေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
Work location No.(91), Ground Floor, Mya Yar Gone Street, Tha Pyay Gone Quarter, Mingalar Taung Nyunt Tsp.
Company Industry: Health/Beauty
47 Days, Full time , Health / Beauty Care
Nurse Health & Medicine Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Arr Yu Par La Clinic Health & Medicine jobs Health & Medicine jobs Health/Beauty Jobs in Myanmar, jobs in Yangon